Iindaba - Lungisa uxinzelelo lweTire ehlotyeni
Lungisa uxinzelelo lweTire ehlotyeni
Ukufika kwehlobo kuthetha ukuba abantu bayakulangazelela ukuqhubela ezantsi kwiindawo ezibukekayo ukuze baphole kumaqondo obushushu asehlotyeni.
Ihlobo alikho nje isalathisi sexesha lokuzonwabisa.Ukufika kwehlobo kwakhona kuthetha ukuba yakhouxinzelelo lwetayaraizakufumana utshintsho.Omabini, amatayara angaphezulu okanye aphelelwe ngamandla, abonisa ingozi enkulu yendlela kwaye abaqhubi basengozini yokwenzakalisa ngokumanyumnyezi kubo nakwabanye.Ngoko ke,uxinzelelo lwetayara ehlotyenikufuneka zihlale zibekwe esweni ukuthintela izehlo ezingafanelekanga.
Isizathu sokuba sigxininise ehlotyeni kukuba uxinzelelo lwetayara luyatshintshatshintsha kakhulu ehlotyeni.Ke ngoko, abaqhubi kufuneka balumke ngakumbi ngelixa beqhuba kwiinyanga zasehlotyeni.Ukutshintsha kwe-12 ° C kuthetha ukuba amathayi aya kulahlekelwa okanye azuze i-PSI eyi-1 (iponti nge-intshi yesikwere).Ngoko ke, ukuba uxinzelelo lwetayara aluchanekanga, unokulindela iingxaki ezininzi ekuqhubeni kwakho.
Kwelinye icala, itayara elivuthelwe ngokufanelekileyo liya kuphucula ukusebenza kwakho kwepetroli, ukulibamba, ukuqhobosha umgama, ukusabela kakuhle, kwaye likwenze uhambe kamnandi xa uphela.Kwenzeka into eyahlukileyo ukubauxinzelelo lwetayara oluchanekileyoayigcinwa.
ITAYARI ENGAFUTSHIWE NGAMANDLA
Itayara elinomoya ophantsi lithetha ukuba ngaphezulu komphezulu wetayara udibana nendlela.Iya kucothisa imoto yakho kwaye ichaphazele kakubi uqoqosho lwakho lwamafutha.Ngaphezu koko, amatayara aphantsi kwamanzi anciphisa ixesha lokuphila kwamatayara, okuthetha ukuba kuya kufuneka utyale imali kumatayara amatsha kwakhona.
Xa itayara livuthelwe kakhulu, indawo encinane idibana nendlela.Ibangela ukuba ivili liguge ngokukhawuleza kwaye lingalingani.Ngaphandle koku, amava okuqhuba ayaqina, ngelixa ukuphendula kunye nokuqhoboshwa kuchaphazeleka kakubi.
LULUNGILE UXINEZELEKO LWETAYARI
Into yokuqala yokujonga ukwazi uxinzelelo oluchanekileyo lwetayara yibhodi yevili, enokuthi ifumaneke kumda womnyango wemoto, umgubasi okanye umnyango webhokisi leglavu.Kwezinye izithuthi, iya kuba phezu okanye kufuphi nomnyango wamafutha.Iya kukuxelela olona xinzelelo luphezulu lwetayara, ngokutsho komenzi.Nceda ukhumbule ukuba iimoto ezininzi zinee-asi zangaphambili nezingasemva zoxinzelelo lwetayara.
Naphantsi kwaziphi na iimeko kufuneka uxinzelelo lwandiswe ukuya kwinqanaba eliphezulu njengoko kunokubangela ukuqhuma kwevili.Ngelixa uqhuba, itayara liyafudumala, nto leyo ebangela ukuba umoya ongaphakathi emoyeni wande.Ngoko ke, ukuba isondo sele likwinqanaba eliphezulu, ngoko liya kuqhuma.
Enye indlela yokuchonga ukuba uxinzelelo lwamatayara lulungile ngokusebenzisa iTire Pressure Monitoring System (TPMS).Iimoto ezininzi zanamhlanje ziza ne-TPMS, ekwazisayo xa uxinzelelo lwetayara lungaphantsi kwinqanaba elicetyiswayo.
Iingcali zincoma ukujonga uxinzelelo lwetayara ekuseni njengoko ubushushu betayara busezantsi kakhulu ngoko.Ngelo xesha, uxinzelelo lwesondo kufuneka lube ngu-2-4 PSI ngaphantsi kwinqanaba eliphezulu.Ukuba uqhube imoto, vumela imoto ukuba iphumle iiyure ezimbalwa, ngaphambi kokuba uhlolisise uxinzelelo.Kwakhona, qiniseka ukuba isithuthi asimiswanga ngokuthe ngqo elangeni, okanye indlela yabahambi ngeenyawo ayishushu kakhulu.
Ixesha lokuposa: Jun-22-2021